Solus 4 ichauya neWayland kunyangwe ichave isingawanikwe panguva ino | Linux Vakapindwa muropa
Solus 4 ichauya neWayland kunyangwe ichinge isingawanikwe panguva ino
Mwedzi wapera isu taifanira kunge takaona kuburitswa kwaSolus 4, iyo nyowani vhezheni yeiyi inozivikanwa nzira yekushandisa mukati mekuparadzaniswa kweGnu / Linux. Nekudaro, iyi vhezheni itsva haisati yasvika uye zvinosuwisa kuti zvinotora nguva kuti isvike, kunyange ichizosvika.
Solus vagadziri Ivo vachiri kushanda pane iyo nyowani vhezheni uye vachiri kutozadzikisa matsva maficha senge nyowani Wayland graphical server. Wayland, sekumwe kugovera, ichave iri muna Solus 4, asi haizove iri default graphical server yekuparadzira.
Mubatanidzwa wemaraibhurari eGTK + (ayo anoshandiswa neGnome neBudgie Desktop) pamwe neWayland haisati iri yakanaka sezvazvinoratidzika uye saka vagadziri veSolus vafunga kusaishandisa seyakajeka graphical server kunyangwe kana zvichizoitika zvekuti chero mushandisi anogona kuiisa uye voishandisa muSolus kana vachida.
Budgie 10.4 ichave iri nyowani vhezheni yako inozivikanwa desktop, asi haizove inotarisirwa uye inoverengeka Budgie 11, vhezheni inotarisirwa nevashandisi vazhinji. Iyo kernel pamwe nemamwe maraibhurari anozivikanwa uye mapakeji zvichave mune yavo yepamusoro vhezheni, seizvi Solus 4 ichave iine kernel 4.15 nyowani kunyangwe iri kuvandudzwa pane kernel 4.9.1.
Kuchave nekumwe kusavapo senge iyo snapd package maneja iyo inobvumidza iyo kuiswa uye kushandiswa kwe snap mapakeji. Aya mapakeji anotarisira kusvika kunaSolus uye ivo vachasvika kunyangwe zvichange zvisiri muSolus 4 pavachadaro asi zvichazotevera. Vagadziri vacho vanoda kuita izvi maneja wepakeji asi basa rinodiwa kuti riite iri richiri rakawandisa uye izvo zvinoita kuti isakwanise kuti Solus 4 ive nayo kana kuitangisa gore rino. Kuvhurwa kwaSolus 4 kunoramba kusingazivikanwe asi hapana nguva zvakarambidzwa mu2018 sezuva rekuburitsa, kureva kuti, mumavhiki mashoma tichava neiyi vhezheni itsva yeSolus nenhau dzayo uye seyakakurumbira sezvazviri parizvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Solus 4 ichauya neWayland kunyangwe ichinge isingawanikwe panguva ino
Trizen: isingaremi package package yeArch Linux-yakavakirwa masystem
Canonical inoda kuunganidza Ubuntu mushandisi data kuti ivandudze kuburitswa kwayo